Dalbo in kabadan 100 milyan oo Aion Bionic ah oo loogu talagalay iPhone 15 | Wararka IPhone
Dalbo in kabadan 100 milyan oo Aion Bionic ah oo loogu talagalay iPhone 15
Qaarkood Ilo wareedyo ku dhow TSMC ayaa tilmaamaya in shirkadda Cupertino ay ka dalban lahayd in ka badan 100 milyan oo Chips ah 15 Bionic qalabkaaga iPhone 13. iPhones-kan cusub ayaa loo maleynayaa in la sii deyn doono bisha Sebtember ee soo socota sidaa darteed waxaa macquul ah in dalabkan loo yaqaan 'chips' uu gebi ahaanba run yahay.
Waxaa macquul ah in processor-kan sidoo kale lagu dari doono moodooyinka iPad mini waxaa la filayaa dhammaadka sanadkan, sidaa darteed dalabku waa inuu sarreeyaa si loo daboolo baahida Apple. Dareenkan, waxa aan ku cadnahay waa in IPhone-ka soo socdaa uu lahaado kayd ku filan oo ka shaqeeya.
Saadaasha iibka ee noocyadan cusub ee iPhone-ka ayaa sarreeya, waana sababta Apple loo filayo inay soo saarto illaa 100 milyan oo iPhone ah sannadkan. Sannadkii hore ee 2020, shirkaddu waxay soo saartay 75 milyan oo qalab, sidaa darteed waa lagama maarmaan in la daboolo ugu yaraan lacagtaas sidaas darteedna Apple waxay sidoo kale 25 milyan oo dheeraad ah ku kordhisaa wax soo saarka. Habka wax soo saar ee processor-radan cusub waa 5 nm.
Warbixinta aan maanta aragnay ee lagu daabacay bogga caanka ah MacRumors waxay muujineysaa in gunta soo socota ay ka muuqan doonto processor-ka lix-geesoodka ah oo leh afar geesood oo tayo sare leh iyo laba geesood oo waxqabad sare leh. Waxay sidoo kale umuuqataa shaashadda inay yeelan doonto qiimo cusbooneysiin ah 120 Hz sida lagu xaman jiray, waa macquul in lagu daro shaashadda «Had iyo jeer la soo bandhigo» kamarad gadaal ka fiican ama ugu yaraan module kaamiro kaladuwan iyo horumarino kale oo waaweyn oo qaabkan ah oo noqda kuwa ugu iibsiga badan sida ay qabaan falanqeeyayaasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Dalbo in kabadan 100 milyan oo Aion Bionic ah oo loogu talagalay iPhone 15
Sida laga soo xigtay Gurman, Aqoonsiga Face wuxuu ku imaan doonaa Mac dhowr sano gudahood
Daawaha Titanium ee iPhone 14 Pro Chassis